SUNSOUL yakavambwa muna2013, isu tiri nyanzvi yekutengesa uye yakasarudzika mukugadzirwa kweTire Kugadzira zvigadzirwa zveGarage uye DIY basa. Chikwata chedu chinotora Mweya weKushinga kuDenha, Kugadzira uye Kuzvipfuura pachako, kuomerera kuKukosha kweKuvandudza mukudzidza nekukura muchidimbu.
SUNSOUL SUNSOUL yakavakirwa pane bhizinesi uzivi hwemhando yekutanga uye sevhisi yepamusoro, mushure mekuenderera kwehunyanzvi uye kusimudzira, timu yedu yatambanudza kubva kuTire Valve, Wheel Kurema uye Tire Kugadzirisa Patch, yakagadziriswa akasiyana siyana. yekugadzira Tire Kugadziridza Kits, YeMota vhiri nati bhaudhi, Wheel spacer uye adapta uye Auto Kugadzira Maturusi neMachina. Isu hatisi chete takazvimiririra kusimudzira iyo SUNSOUL brand, asi zvakare kupa zvakagadzirwa zvigadzirwa kune ODM vatengi.
SUNSOUL inogadzira kukura kunobatsira kuburikidza neyakaenzana bhizinesi portfolio kuve nechokwadi chekubudirira. Isu tinoteedzera kukwana uye kugona. Vashandi vakatanhamara ndiyo hwaro hwebudiriro yekambani. Tsika yedu inoonekwa nekushinga, kujeka uye kuremekedzana. Tinokurudzira vashandi kuti vave varidzi uye vakure pamwechete nekambani.
SUNSOUL inofara zvikuru nekubatana kwevamwe vedu vatinoshanda navo. Tinotenda timu nemipiro yavo uye takaona kukosha kwedu papuratifomu. Rega chiitiko chedu chikushandire. Ngatishandei pamwechete kuti tizadzise zviroto zvedu.
Isu tinogadzira uye tinopa akasiyana marudzi esimbi ekugadzirisa michina
Nedu tekinoroji yepamberi uye timu yehunyanzvi, tiri kukura nekukurumidza.Needu tekinoroji yepamusoro uye timu yehunyanzvi, tiri kukura nekukurumidza.
Machina maturusi edu anowanzoiswa pano. Iyi workshop yakakura zvakakwana kuti igone zviuru zvemichina mikuru. Iyi nzvimbo yemusangano inenge 2000 mativi emamirimita.